Russia nyere iwu 'izu na-adịghị arụ ọrụ' ka ọnwụ COVID-19 na-arị elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Russia nyere iwu 'izu na-adịghị arụ ọrụ' ka ọnwụ COVID-19 na-arị elu
Russia nyere iwu 'izu na-adịghị arụ ọrụ' ka ọnwụ COVID-19 na-arị elu.
Nọmba Russia na-anwụ kwa ụbọchị COVID-19 na-agbago elu ruo ọtụtụ izu wee rute 1,000 na nke mbụ n'ime ngwụsị izu n'etiti ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi na-adịghị ike, enweghị echiche ọha na eze maka ịkpachapụ anya na enweghị mmasị gọọmentị na mgbochi siri ike.
Russia kọrọ akụkọ ọnwụ 1,028 COVID n'ime awa 24, ọnụ ọgụgụ kachasị elu kemgbe mmalite oria ojoo a.
A kọrọ na ọnụ ọgụgụ ndị kacha gbuo na obodo abụọ kachasị ukwuu na mba ahụ, Moscow na St. Petersburg.
Enwekwara mmụba ngwa ngwa na ọnụọgụ nyocha dị mma maka nje a, ebe mmadụ 34,073 ekwenyela na ha bu ọrịa n'otu oge ahụ.
E nyere ndị ọrụ Russia iwu ka ha kwụsị ọrụ ruo otu izu malite na ngwụcha ọnwa a n'etiti ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ọrịa COVID-19 ọhụrụ na ọnwụ.
Onye isi ala Russia Vladimir Putin kwadoro atụmatụ gọọmentị inye ndị ọrụ n'ofe mba ahụ ezumike izu, iji kwụsị oke ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ site na coronavirus.
Ndị ọrụ gọọmentị Russia na Wednesde kọrọ ọnwụ 1,028 COVID n'ime awa 24 gara aga, ọnụ ọgụgụ kachasị elu kemgbe mmalite nke ọrịa a. Nke ahụ wetara RussiaỌnụ ọgụgụ ndị nwụrụ ọnwụ ruru 226,353, nke bụ nke kachasị elu na Europe.
Na nzukọ nke ndị ọrụ gọọmentị na Wednesde, Putin nyere ohere maka nkwadebe ịgbatị ezumike ụbọchị ezumike ụbọchị abụọ ma debe ọtụtụ ndị ọrụ n'ụlọ, na-akwụ ụgwọ, otu izu zuru oke.
N'okpuru atụmatụ a, a ga-emechi ụlọ ọrụ na mba niile n'etiti Ọktọba 30 na Nọvemba 7, mana Putin gbakwụnyere na mpaghara ụfọdụ ebe ọnọdụ kacha dị egwu, oge anaghị arụ ọrụ nwere ike bido n'isi Satọde wee gbatịkwuo ya mgbe ọnwa Nọvemba 7 gachara.
Dị ka Putin si kwuo, ọ dị mkpa ugbu a Russia "Ọ na-agbaji agbụ mgbasa nke nje… Isi ọrụ anyị ugbu a bụ ichebe ndụ ụmụ amaala na, ka o kwere mee, belata mgbasa nke ọrịa COVID-19."
Atụmatụ ahụ na-atụkwa aro ka ebugharịa ndị ọrụ niile agbabeghị ọgwụ mgbochi ọrịa karịa afọ 60 na nhazi ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ọnwa na-abịa, wee nye ndị ọrụ ụbọchị abụọ dị iche iche nke ha ga-aga wee gbaa ọgwụ mgbochi megide COVID-19.
RussiaỌnụ ọgụgụ ndị na-anwụ kwa ụbọchị COVID-19 na-agbago elu ruo ọtụtụ izu wee rịa elu 1,000 na nke mbụ n'ime ngwụsị izu n'etiti ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi na-adịghị ike, enweghị echiche ọha na eze maka ịkpachapụ anya na enweghị mmasị nke gọọmentị ime ihe mgbochi siri ike.
Ihe dị ka nde ndị Russia iri anọ na ise, ma ọ bụ pasent 45 nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 32, na -agba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Na mpaghara ụfọdụ, mmụba nke ọrịa na -amanye ndị ọchịchị ịkwụsị enyemaka ahụike nye ndị bi ebe a na -amanye ụlọ ọrụ ahụike ilekwasị anya n'ịgwọ ndị ọrịa coronavirus.
In Moscow, agbanyeghị, ndụ gara n'ihu dịka ọ na -adị, ebe ụlọ oriri na ọ theụ andụ na ebe ihe nkiri na -ejupụta na ndị mmadụ, igwe mmadụ na -eme oriri na nkwari abalị na karaoke na ndị njem na -eleghara iwu nkpuchi anya n'ụgbọ njem ọha, ọbụlagodi na ngalaba nlekọta ahụike juputara n'izu ndị na -adịbeghị anya.
Na mbido Wenezde, ndị ọrụ Russia kwupụtara na mba ahụ edekọla ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ coronavirus metụtara kemgbe mmalite nke ọrịa na-efe efe n'afọ gara aga nakwa na a kọrọ ọnụ ọgụgụ ndị kacha gbuo na obodo abụọ kachasị ukwuu na mba ahụ, Moscow na St. Petersburg.